Fa naninona i Shina no nanaisotra an-tserasera ny filma propagandiny? Notondroin’ny mpiserasera ny fanasaziana ara-teknôlôjian’i Etazonia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Avrily 2018 5:26 GMT
Tsy hita an-tserasera tampoka ny Amazing China, filma fanadihadiana iray mampiseho ny zava-bitan'i Shina eo amin'ny sehatry ny siansa, teknolojia ary ny fampihenana ny fahantrana nandritra ny fitarihan'i Xi Jinping.
Mankasitraka ny fanohanan'ny orinasanareo amin'ny fanajana ny fizakamanana (copyright) izahay. Mba hamelomana ny tontolo mirindra an-tserasera, dia mamoaka filazana momba ny fitsinjarana ny “Amazing China” izahay:
Tsy nisy ny fanazavana ofisialy mahatonga ilay filma ho mety hisy fiantraikany (ratsy) amin'ny tontolo an-tserasera “mirindra” any Shina. Nieritreritra ny sasany fa nesorina ilay filma mba hampitomboana ny fotoana ijerena ny filma any amin'ny teathra.
Noraràn'ny governemantan'i Etazonia tamin'ny herinandro ny orinasa amerikana tsy hifampiraharaha ara-pihariana amin'ny ZTE Corp avy any Shina noho ny nanaovany fanambarana diso nandritra ny famotopotorana ny fifanarahana ara-pihariana ifanaovany amin'ny andry iraniana miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana.
Io tranga io indrindra no namoaka ny faharefoan'i Shina amin'ny maha-mpanavao teknolojia azy. Miankina dia miankina amin'ny fanafarana mpampita herinaratra hamokarana solosaina, finday, fiaramanidina, fiara ary zavatra maro hafa i Shina. Amin'izao fotoana izao, mankany Shina avokoa ny 60 isanjaton'ny potsin-tsolosaina [chip=puce] voavarotra manerantany isa-taona.
7 ora izayKanadà